Udiyaar Garowga Ciida Iyo Nadiifinta Guriga - Daryeel Magazine
Asalaamu Calaykum Waraxmatullahi Wabarakatuh
Alxamdulilah waxaa inaga sii dhamaanaysa Ramadaantii. Runtii waa wax laga naxo in 30 cisho oo Cadaabka albaabadiisa la xidhay ee ay furnaayeen albaabada Jannada, lana xidhxidhay shaydaanka ay dhamaan rabaan. Allahu aclam in la gaadhi doona Ramadaanta danbe. Allah waxaan ka baryayaa ina uu nagu daro kuwa loo danbi dhaafay ee laga xoreeyey cadaabka Jahannaba. Allah naga caqbalo inta yar ee aan camal falnay, Allah naxariistiisa ha ina wadda siiyo, inta inaga dhimatay ee Aabahay iyo dhamaan ahalkayga uugu horeeyaan, dhamaan ummada muslimiinta ah gar ahaan dadkayga soomaaliyeed Allah u naxariisto Qabuuraha Allah u waasiciyo, Jannah Allah ka waraabiyo. Dhamaanteen waxaynu jecel nahay oo Janno u horayso Allah ina wadda siiyo.
MashaAllah tabaraka Allah waxaa inooga hadhay ayaamo yar farxadii khatinka Ramadaanka ee Ciidul Fitr. InshaAllah waxaan rabaa inaan halkan ku soo gudbiyo talooyin yaryar oo kala ah:
– Nadaafada guriga
– Shoping ka ciida
– Nadaafada iyo nasashada jidhka
– Cuntooyinka maalinta ciida
– Carruurta iyo maalinta ciida
Waxaa haboon inshaAllah inaad maalin walba ayaamaha yar ee kuu hadhay aad uuga faa iidaysatid inaad guriga uugu diyaarisid maalinta ciida. InshAllah ayaanba meel ama qol xooga saar oo hal mar dhabarka ha iska jabin oo yuuna soonkaagu kaaga nusqaamin , haraadna yuuna ku dilin ee ayaan waxaad samaysaa :
– Ayaan in aad jidkaga aad maydhid , xafashka iyo qashinka iyo wixii aan loo baahnayna ka daadi. Waxaa aad kuu caawinaya haddii aad ku madhiid jikada baking soda iyo khal. Aad ayey kuugu nadiifoobaysaa kijada waliba urta oo dhamina way ka baaba aysaa. Marka aad nadaafada u dhamaysidna isku day inaad khaanadaha oo dhan aad habaysid oo aad nidaamisid si qurux badan meelwaba. Kadibna ka badal daahyada iyo wixii sharaxaad ah ee aad ka badali kartid.
– Ayaanta labaadna waxaad ka shaqaysaa qololka oo dharka oo dhan kala gur oo waxaanad u baahnayn dadka sii ama bakhaarka iska gee ama iskaba daadi haddii aan wax anfacaad leh ayna ahayn. Kabacdi kuli daaqadaha iyo meelkasta oo maydhid u baahan iska maydh. Kadibna qurxi oo sariiha , daahyada iyo gogosha saraaran sariiraha isku wadda match garee oo wax is aqaadan kara ku xidh si ay bilic doodu u soo baxdo. Qololka hurdadana markata ka ilaali wixii xafash iyo wax aan loo baahnayn oo dhan. Qolka hurdadu waa inuu yahay meel faadi ah nadiif ah oo bilaa dhas ah si aad habeenkii sifiican aad uuga seexan kartid walibana sanboorka iwm aad uuga badbaadid.
– Ayaanta saddexaadna waxaad ka shaqaysaa fadhiga iyo musqulaha. Fadhiga wixii qab iyo culays ah oo dhan ka nidaami. Fadhigu waa inuu yahay meel aysan alaab buuq ihi ayna oolin. Waa inuu yahay feel faalal ah, iftiin badan leh, hawo macana leh iyo waliba aad u qurux badan. Waxaad isku daydaa inaad wixii sida warqadaha , buuga iyo flower ka caaqaha iyo wixii gidaarada sawir ka buuxoo dhan aad ka nidaamisid. Flower ka caaqahi ma qurux badana , caafimaadkana uuma wacna oo dhaska ayaa kuu fadhiisanaya oo sanboor iyo xasaasiyad baa laga qaada. Amaase badalkoodu waa dhirta qoyan oo hawo wacan guriga ku furta indhahana u roon. Haddii ay noqoto xagga buugaga iyo warqadaha meelska saaran , kala nidaami oo wixii aan loo baahnayn iska daadi wixii loo bahan yahayna isku day inaad ku gurtid waxyaabaha buuga iyo warqadaha lagu nidaamiyo oo aad ka heli kartid tukaana baabu raqiiska ah. Waxaa kuu soo hadhay fadhigu uuma baahan in roog tin ilaa cidhib lagu gooyo. Rooga waxaad dhigan kartaa inta yar ee cagaha kuu qabanayaan ee fkursiga adhiga agtiisa. Waxaa kuu soo hadhay waxyaabaha sida kabadhaha ama armaajooyinka waa wayn looma baahana oo cidhiihdi uun bay ka dhigayaan meeshii wasakhdana way kuu qabanayaan. Waxaa kugu filan miisyar oo khaanado yaryar leh oo tv aad saaratid. Amaase daahyada waa wayn ee inaga qabanaya iftiinka cadceeda iyo hawadda caafimaadka iyo quruxda guriga mid uuma fiicna. Gurigu wuxuu u baahan yahay hawo iyo iftiin., haddii uu waayona waxaa ku dhalanaya dhaam iyo makroob, ur qadhmuuna wuu yeelanayaa. Waxaad u baahan tahay daahyo yaryar oo khafiif ah oo fudud hawaddana ka soo gali karto iftiinkuna ka soo gali karo. Haddii aad ka baqaysid in banaanka laga soo arko adoo bilaa xiyaab ah waxaad daaqad ku dhajinkartaa waxyaabaha daaqada lagu dhajiyo oon iftiinka iyo hawadda kaa xidhayn balse dadka kaa qabanaya inay ku arkaan.
Waxaad ogaataa maadama aynu ku noolnahay dhul aan iftiinkuusa badnayn inay lagama maarmaartahay in gurigu iftiin badan leeyahay, marka ar cadceed jirtana in cadceeda guriga loo soo daayo. Madowga iyo huurka waxaa laga qaadaa cuduru aad u faro badan oo ay ma midyihiin khaasatan cudurada maskaxda, cudurada idhaha iyo qaarkale oo badan. Sidaa awgood maa muhiin iftiinku xagga caafimaadka iyo xagga quruxda gurigaba. Isku day in alaabtaada ayna noqon kuwo aad u waawayn oo boos badan kaa qabsada, isku dayna in aad sharaaxaadaada isa soo siyaabiyaan.
Haddii aynu u soo noqono xagga musqusha ama qaybta maydhashada waxa uugu muhiimsan waxa wiiyi nadaafada in maalinkasta la nadiifiyo maadama meel waskhbadan ka dhalan karto tahay iyo waliba meel nijaas ka dhalan karto. Intaa wixii ka soo hadhayna waa in biyaha markasta laga qalijiyaa si ayna bakteeriyadu uugu carbismin. Haddii aad rabtid meel bilic lehna, isku day inad tuwaalada nidaamisid, shampoo iyo saabunaha, cream yada iwm la mid ahna meel u samee oo habaysan. Amaase dacsada iyo bahasha saabuunta lagu shubto, ta cadayga iwm la midka ah baad isku match garayn kartaa.
Haadii aaynku soo afjarno u diyaar garoowga maalinta ciida ee xagga nadaafada waxaan kala oon ku dari lahaa, in meesha kabaha la dhigo iyo jaakadaha la sudho aan nidaam u yeelno oon qurxino oon waliba aan urta ka ilaalilo. Kabuhu way uraan, meesha la dhigaana way urbadan tahay maadama lagu dhididayo wasakh badana lagu soo istaagayo marka la socdo. Waxaad taa ku nadiifin kartaa khal iyo baking soda. Khalka ku maydh meesha aad kabaha dhigaysid. Baking soda ku shub kabaha uraya oo dhan guntooda ama meesha ay yaalan urta oo dhan baa baabayasa, maadama ya khalka iyo baking soda ay yihiin laba wax oo dila makroobka, inta badan urtuna waxay ka timaad makroob iyo wasakh. Ugu danbayntii ku dadaal gurigu inaad daaqadaha u furtid maalin walba oo aad hawadda xun ka saartid. InshaAllah waxaan kuu rajaynaa blessed house with Allah´s Raxmah.
La soco qoraalada kale ee:
Nadiifinta Iyo Hagaajinta Jikada Macmacaanka Ciida Sida Guriga Loo Carfiyo Xiliga Qaboobaha Faa’iidada Qarsoon Ee Ay Raggu Ka Helaan Qabashada Howsha Guriga